Shilalekha » माछापुच्छ्रे र सनराइज बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुनमा कति ? माछापुच्छ्रे र सनराइज बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुनमा कति ? – Shilalekha
माछापुच्छ्रे र सनराइज बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुनमा कति ?
काठमाडौं । दुई वाणिज्य बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । माछापुच्छ्रे र सनराइज बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् । दुई वटै बैंकले फागुनदेखि लागूहुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
माछापुछ्रे बैंकले साधारण निक्षेप अर्थात बचततर्फ न्यूनतम २ देखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म ब्याज कायम गरेको छ । हाल बैंकले विभिन्न १४ वटा बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
त्यसैगरी मुद्दति निक्षेपतर्फ ३ महिनादेखि ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि न्यूनतम ६।६० प्रतिशतदेखि अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको छ ।
बैंकले रिक्युरिङ निक्षेपमा ६ महिनादेखि ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि ७ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । बैंकले कर्जातर्फ होम कर्जा, अटो कर्जा, कमर्सियल भेहिकल कर्जा, मोर्टेज कर्जा, मोर्टेज प्लस कर्जा, स्यालरी प्याकेज कर्जा, एमबीएल प्रोफेसनल कर्जा, प्रिभिलेज कर्जा, एजुकेशन कर्जामा बेसरेटमा थप अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
त्यसैगरी बैंकले ओभरड्राफ्ट, डिमान्ड कर्जा, सर्ट डिमान्ड कर्जा, ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा, प्लेज्ड कर्जा, प्याकिङ क्रेडिट कर्जामा पनि बेसरेटमा थप अधिकतम ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
बैंकले स्थिर ब्याजतर्फ घर कर्जाको लागि ५ वर्षसम्मका लागि ९.८९ प्रतिशत, ५ देखि १० वर्षसम्मका लागि १०.८९ प्रतिशत, १० वर्षभन्दा माथिका लागि ११.८९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने अटोलोनतर्फ ५ वर्षसम्मका लागि ९.९९ प्रतिशत, ५ देखि १० वर्षसम्मका लागि १०.९९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।
त्यस्तै, फागुन महिनाका लागि सनराइज बैंकले पनि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ ।हाल सनराइज बैंकले १७ प्रकारका साधारण बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
जसमा बैंकले २ प्रतिशतदेखि ३.६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको छ । बैंकले मुद्दति निक्षेपतर्फ ६.५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी कर्जातर्फ बैंकले डिमान्ड कर्जा, रियल स्टेट कर्जा, एक्सपोर्ट फाइनान्स कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा, टर्म कर्जा, प्लेज्ड कर्जा, इम्पोटर्स कर्जा, एचपी कन्जुमर कर्जा, सनराइज घर कर्जा, सनराइज एजुकेशन कर्जा, सराइज सजिलो कर्जा, सनराइज सिग्नेचर कर्जा, सनराइज गोल्ड कर्जा र सनराइज कृषि कर्जामा बेसरेटमा थप अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ ।
त्यसैगरी स्थिर ब्याजदरतर्फ होम लोनमा १०.५ प्रतिशतदेखि ११.५ प्रतिशतसम्म, एजुकेशन लोनतर्फ ११ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म, सनराइज सजिलो कर्जातर्फ १०.७५ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको छ । बैंकको आधारदर ७.२९ प्रतिशत छ । त्यसैगरी स्प्रेड रेट ४.१० प्रतिशत छ ।